Global Voices teny Malagasy » Maoritaniàna Bilaogera afaka tamin’ny fanamelohana ho faty, saingy mbola mihiboka am-ponja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Mey 2019 17:39 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Maoritania, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Tamin'ny 2014, voaheloka ho faty i Ould Mkhaitir noho ny lahatsoratra iray fanehoankevitra nataony tety anaty aterineto.
Na foana  aza, herintaona lasa izay, ny fanamelohana azy ho faty, dia mbola tavela any am-ponja foana  ilay Maoritaniàna bilaogera Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir
Tamin'ny 2014, voaheloka ho faty i Ould Mkhaitir, noho ny lahatsoratra iray fanehoankevitra navoakany tao amin'ny tranonkalan'ny gazety Aqlame.  Tao anatin'ilay lahatsoratra, nitondra ny lohateny hoe “Finoana, ny maha-relijiozy ary ireo Mapanao asatànana”, nokianin'i Ould Mkhaitir ny anjara toeran'ny finoana ao anatin'ny rafitra saranga ao Maoritania, tamin'ny fampiasàna ireo tantara avy amin'ny tantaram-painan'ny mpaminany Mahometa mba hanohanany ny heviny. Efa nesorin'ny Aqlame ilay lahatsoratra niaingàna voalohany, saingy mbola azo jerena aty anaty aterineto. 
“Fivadiham-pinoana” no niampangàn'ny fitsaràna iray azy sy nanamelohana azy ho faty, araka ny Toko faha 306 amin'ny Lalàna Famaizana Maoritaniàna. 
Tamin'ny Aprily 2016, nohamafisin'ny fitsaràna mpandrava didy ny didy fanamelohana azy, ary io no nandefa ny raharahany ho any amin'ny Fitsaràna Antampony, izay avy eo namerina  izany ho any amin'ny fitsaràna mpandrava didy noho ny ‘fisian'ny tsy fanarahana dingam-pitsaràna”.Tamin'ny Novambra 2017, novàna  sy nahenan'ny fitsaràna mpandrava didy ho sazy an-tranomaizina mandritra ny roa taona ilay fanamelohana azy ho faty. Na izany aza, na dia efa nahavita mihoatra noho ilay roa taona tany am-ponja izy, tsy mbola nanafaka an'i Ould Mkhaitir ireo manampahefana. Efa ho 18 volana taorian'ilay fanapahankevitry ny fitsaràna mpandrava dudy mba hamotsorana azy, mbola any am-ponja ihany izy.
Ny 24 Aprily 2019, nilaza  ny minisitry ny fitsaràna ao Maoritania fa “fitànana vonjimaika” no atao an'i Mkhaitir, sy hoe “ny Fitsaràna Antampony irery ihany no afaka mandidy ny momba azy.”
Tany aloha ny Toko faha-306 amin'ny Lalàna Famaizana dia nilaza fa raha toa ny olona iray nohelohina ka “nibaboka” talohan'ny hamonoana azy, dia azon'ny Fitsaràna Antampony ao Maoritania atao ny manala ny sazy fanamelohana azy ho faty ka hanjary ho famonjàna telo volana hatramin'ny roa taona, miampy sazy ara-bola.
Saingy tamin'ny Aprily 2018, nolanian'ny Antenimiera Maoritaniàna ny lalàna iray mametraka ny fanamelohana ho faty tsy maintsy atao amin'ny olona rehetra voaheloka ho nanao ‘kabary faniratsirana finoana sy fihetsika voalaza fa “manimbazimba”
“Toa mifamatotra amin'ny raharaha nanjo azy ny fotoana namoahana ilay lalàna, volana vitsy monja taorian'ny nandidian'ny fitsaràna mpandrava didy mba hamotsorana an'i Mkhaïtir”, tamin'ny Novambra 2018, hoy ny  Human Rights Watch.
Zavapady ny fanakianana ny fanavakavahana sy ny rafitra saranga ao Maoritania, ary niteraka fandrahonana  maro ara-politika sy araka ny lalàna natao tamin'ireo mpanao gazety sy mpikatroka tato anatin'ny taona vitsy. Tamin'ny 1981, i Maoritania no firenena tratra farany indrindra tamin'ny fanafoanana tamin'ny fomba ofisialy ny fanandevozana, ary tamin'ny 2007 izy vao mba nanao izany ho toy ny heloka bevava. Saingy hatramin'izay fotoana izay, efa voarakitr'ireo manampahefana avy amin'ny Firenena Mikambana  sy ireo mpiasa mpiaro zo  ny porofo hoe an'arivony maro ny olona, izay foko Haratines  avy amin'ireo Afrikàna mainty ny ankamaroany, no mbola andevozina,  miaina anaty fepetran'ny asa an-terivozona, na raha tsy izany dia miatrika fanavakavahana mifototra amin'ny resaka saranga.
Lavin'ny  governemanta Maoritaniàna ny hoe mbola misy fanandevozana ao amin'ny fireneny, ary marobe ny olona toa an'i Ould Mkhaitir, izay miteny manohitra ilay fomba fanao sy fanavakavahana atao an'ireo Haratines, no naiditra am-ponja sy nenjehina. Tamin'ny Septambra lasa teo, nogadraina  sy nohelohin'ireo manampahefana ilay mpikatroka, Abdallahi Salem Ould Yali, fa hoe niantso herisetra sy fankahalàna fiaviana tamin'ny namoahany hafatra tao amin'ny vondrona WhatsApp niampangàny ny zavamanjo mahatsiravina sy ny fanilikilihana iainan'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/08/138482/
 mbola tavela any am-ponja foana: https://news.yahoo.com/mauritania-blasphemy-blogger-still-held-says-minister-171622955.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADWMAhIcsn78vTBVoTKfgsxP02H_HN9WeZ0v--nrsFDjQmVMEtqzAMM7opZ0tcWQ6Gu7NynSJX9PIP6xrFkc17Yr9Cttdqa3Jbu0H8Wn4D1Pq_wpaaB4Tpw68y1bJn5aMciBVJ1hzyaUiDNMXM-i0VVf23_jXbkpCHos6mbdR3mU&_guc_consent_skip=1557133367
 Lalàna Famaizana Maoritaniàna.: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-1983-penal.pdf
 manampahefana avy amin'ny Firenena Mikambana: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/156/27/PDF/G1015627.pdf?OpenElement
 mpiasa mpiaro zo: http://unpo.org/downloads/2375.pdf